(အတွေးအမြင် အမှတ် ၃၀၈ မတ် ၂၀၁၈ ) မိုးမခ၊ မတ် ၁၊ ၂၀၁၈
(”Journalism“ (သတင်းစာပညာ) လုို့အမည်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်ကုို James Glen Stovell (ဂျိမ်းစ် ဂလန် စတုိုဗယ်) ကရေးပါတယ်။ ဂျိမ်းစ်ဟာ ၁၉၄၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာ၈ ရက်နေ့ ဖွား အလာဘားမား (Alabama) တက္ကသိုလ်က သတင်းနှင့်အချက်အလက်ဆုိုင်ရာဌာန အငြိမ်းစား ပါမောက္ခ ဖြစ်ပါတယ်။ သူက လက်ရှိ (၂၀၁၈ လက်ရှိအနေအထားအရ) သတင်းရေးသားခြင်းဆုိုင်ရာ ဘာသာရပ်ကုို သင်ကြားနေဆဲ၊ ၀က်ဆုိုက်သတင်းစာပညာကုို သင်ကြားနေဆဲ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ကာ စာရေးဆရာအဖြစ်နဲ့ ဂျေပရော့ဖ် (jprof) ၀က်ဆုိုက်မှာ ရေးသားနေဆဲသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။) ယခုစာအုပ်က သက္ကရ်ာဇ် ၂၀၁၁ ကထွက်ခဲ့တဲ့စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ကုို ၂၀၁၃ ခုနှစ်က ဖတ်ဖုို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။ ဒီမှာတော့ ဂျိ်မ်းစ် ကသူ့အာဘော်အတုိုင်း နိဒါန်းပျိူး ရေးထားတာကုို ဖြည့်စွက် ဘာသာပြန်ပေးထားတာပါ။ စာရေးသူဖြည့်စွက်ထားတာတွေကို ကွင်းစကွင်းပိတ်နဲ့ လုပ်ပေးထားပါတယ်။)
”သတင်းစာဆရာတွေက ကျွန်တော်တုို့ကုို ကျွန်တော်တုို့အကြောင်းတွေ ပြောပြကြတယ်။“
(လို့သူကအစချီထားပါတယ်။ သတင်းစာတွေထဲမှာပါတဲ့သတင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လုို့ သူ့အမြင်ကုို ရေးထားတာပါ။ သတင်းစာတွေကပေးတဲ့သတင်းတွေကုို တော်တော်လေး လေ့လာဆန်းစစ်ပြီး သုတေသနလုပ်ကာ ရေးထားတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Journalist တွေကို သူကတော်တော် ချီးမွမ်းခန်းဖွင့်ထားတယ်လုိ့ ယူဆရပါတယ်။ Journalist ကုို သတင်းစာဆရာ၊ သတင်းရေးတဲ့သူတွေ လုို့ဆုိုရပါမယ်။ သူ့နိဒါန်းအရတော့သူက သတင်းစာဆရာဘ၀တွေ၊ သတင်းရေးတာကုို စိတ်ဝင်စားသူတွေ၊ သတင်းလုိုက်ရတာကုို အရသာတွေ့သူတွေကုို ချီးမွမ်းခန်းဖွင့်ထားပါတယ်။ ဒီအလုပ်ဟာ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် ခင်ဗျားတုို့လည်း လုပ်ကြည့်ကြပါဦးလို့ ဆုိုထားပုံပါပဲ။)
သည်လုိုအလုပ်ဟာဖြင့် ကျွန်တော်တုို့အတွက် အရေးကြီးသလို လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်လည်း မရှိမဖြစ်လုိုအပ်လျက်ရှိပါတယ်။ သူတို့ပေးတဲ့ သတင်းတွေဟာ ကျွန်တော်တုို့ဘ၀တွေအတွက်လဲ ဖြစ်သလို ကျယ်ပြန့်တဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း ဆက်သွယ်ပေးနေပါတယ်။ အဲဒီသတင်းအချက်အလက်တွေက ကျွန်တော်တုို့ကုို ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချပေးတယ် …. ဥပမာ မုိုးလေ၀သ သတင်းတွေကုို ဖတ်ပြီးတော့ ထီးယူသင့်မယူသင့်…. ပညာရေးသတင်းတွေ ဖတ်ပြီးတော့ ဘယ်လုိုင်းကုိုယူသင့်တယ်၊ ဘယ်လုို ရွေးချယ်သင့်သလဲ စသည်ဖြင့်….. ဒီလုို သတင်းသမားတွေက ပေးတဲ့ သတင်းတွေကုို မဖတ်ပဲ ကျွန်တော်တုို့ရဲ့ဘ၀က ဘယ်လုိုပြည့်စုံမလဲ။
ဟုတ်ပါတယ်။ သတင်းစာသမားတွေပေးတဲ့ သတင်းတွေကုိုကြီးပဲ မမှီခုိုပဲနဲ့ ကုိုယ့်ဘာသာကိုယ်လည်း သတင်းအချက်အလက်တွေ ရနိုင်ပါတယ်။ – သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေကြား၊ စာအုပ်တွေ ဖတ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်၊ ရုပ်ရှင်တွေ ထဲကဖြစ်ဖြစ်၊ လက်ကမ်းကြော်ငြာတွေဆီကနေ၊ ဒါမှမဟုတ် ကြော်ငြာဘုတ်တွေဆီက (အခုခေတ်ဆုိုရင်တော့ ဖေ့ဘုတ်ကနေ ရနေတဲ့သတင်းတွေ ကိုထည့်သွင်း စဉ်းစား ရလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။) စသဖြင့် စသဖြင့် ရနုိုင်ပါတယ်လုို့ စောဒကတက်လို့ ရပါတယ်။ သုို့သော် သတင်းစာဆရာတွေက သည့်ထက် ပုိုပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့ နယ်ပယ်တွေဆီကုို ရောက်အောင်သွားပြီး အချက်အလက်တွေ စုဆောင်း၊ ရယူ၊ မှတ်သားလုို့ ကျွန်တော်တုို့က စုပေါင်းပြီး ဖတ်လုို့မှတ်လုို့ရအောင် လုပ်ပေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းသမားများဟာ ကျွန်တော်တုို့ရဲ့ဘ၀တွေထဲကုို တုိုက်ရုိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝုိုက်ပြီးဖြစ်စေ သတင်းအချက်အလက်တွေ ထိတွေ့လုို့ရအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ သင်အခုဘာလုပ်နေသလဲ သင်ကအခုဘာလဲ ဆုိုတဲ့အချက်အလက်တွေဟာ သတင်းသမားတွေရဲ့ သြဇာသက်ရောက်မူနဲ့ မကင်းနုိုင်ပါဘူး။
သတင်းစာဆရာတွေကပေးတဲ့ အချက်အလက်တွေက လူတစ်ကုိုယ်စာတင်မက ကျွန်တော်တုို့ နေထုိုင်နေတဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးဆီကုိုပါ အကျိူး သက်ရောက်နေပါတယ်။ အဲသည်အကျိူးသက်ရောက်မူ ဘယ်လောက်တောင်များလဲလုို့ ဆုိုတာ ကုိုလေ့လာကြည့်လုိုက်တော့ နုိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမူရေး၊ စသဖြင့် စသဖြင့် တွေဆီကုိုပါ ဖြန့်ကျက်လျက်ရှိနေပါရောလား။ သတင်းစာသမားတွေက ကျွန်တော်တို့ကုို ပတ်ဝန်းကျင်အသိအမြင်တွေအပြင် ဒီအသိအမြင်တွေကုို တခြားလူတွေကုို ဘယ်လုို ဝေမျှရမယ်ဆုိုတာကိုပါ လမ်းပြပေးနေပါတယ်။
သတင်းစာပညာဟာ အထူးသဖြင့်တော့ အမေရိကန်တွေရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ မရှိမဖြစ် လုိုအပ်တဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ (အမေရိကမှာ သတင်းစာတွေကုို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖတ်ရူနေတဲ့ ပရိသတ်တွေ ရှိနေဆဲပါ။ သူတုို့က သတင်းစာတွေကုို ဖတ်ဆဲ၊ အချက်အလက်တွေကုို လေ့လာနေဆဲ၊ အချင်းချင်း ဆွေးနွေးနေကြဆဲ လို့ သူက အတိအကျ ဆုိုထားပါတယ်။ ဒါ ၂၀၁၁ စစ်တမ်းအရပေါ့။) သတင်းစာတွေကနေ ပေးတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေကုို ရယူတယ်ဆုိုတာ ဟုိုးရှေးကတည်းက ကျင့်သုံးလာတဲ့ ရှေးအယူအဆတစ်ခုလုိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွကုို တဖန်ပြန်ပြီး ထင်မြင်ချက်တွေပေးကြ၊ ဝေဖန်သုံးသပ်ကြ၊ အကြံညဏ်တွေရယူကြတယ်ဆုိုတာ ထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ရပ်လုို ဖြစ်နေတာ အမေရိကန်လူမျိူးတွေကြားထဲမှာပါ (တဲ့။)။ ဒါတွေကို သတင်းစာပညာမရှိပဲ ဘာမှ လုပ်လုို့မရပါဘူး။
သည်တော့ ဒါလောက်တောင် အရေးပါတဲ့ သတင်းစာပညာကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ သင့်ရဲ့အလုပ်က သတင်းစာပညာနဲ့ ဘာမှမဆုိုင်လဲပဲ ပေါ့လေ။ ဟောဒီစာအုပ်က သတင်းစာပညာ ဆုိုတာဘာလဲဆုိုတာကုို မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ စာအုပ်။ သတင်းစာပညာ ဆုိုတာ
– ကျယ်ပြန်တဲ့ စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းကုို သိမြင်ဖုို့
– သင်ဖတ်နေတဲ့သတင်းတွေက ဘယ်လုိုကနေ ဘယ်လုို ရရှိ၊ ထုတ်ပြန်သလဲဆုိုိတာကို နားလည်ဖုို့
– သတင်းအဖွဲ့အစည်းတွေ ဘယ်လုို လုပ်ကုိုင်ကြသလဲဆုိုတာကုိုသိဖုို့
– သတင်းစာပညာ အကြောင်းကုို တီးမိခေါက်မိဖုို့
– အနာဂတ်သတင်းစာပညာ ဘာဖြစ်နုိုင်သလဲလို့ တွေးခေါ်ကြည့်ကြဖို့
သည်တော့ သတင်းစာပညာဆုိုတာ ဘာလဲလုို့ လေ့လာစမ်းစစ်သူတွေအတွက် သတင်းစာဆရာတစ်ယောက် အဖြစ်ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုိုယ်လည်းပဲ စဉ်းစားကြည့်မိစေဖုို့ သည်စာအုပ်က ဖော်ညွန်းထားပါတယ်။ သင်လည်းပဲ တနေ့တချိန်ကျ သည်အလုပ်ကုို စိတ်ဝင်တစား လုပ်ဖြစ်မယ်၊ သတင်းမီဒီယာကုို သင်လည်းပဲ လုပ်ကြည့်ချင်မယ် ဆုိုရင် သည်စာအုပ်က အထောက်အကူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ အင်မတန် အသိပညာချမ်းသာကြွယ်ဝလှတဲ့ သတင်းစာပညာသမုိုင်း ကို ဒီစာအုပ်မှာ တွေ့ကြမြင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကကျတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အလုပ်တွေ ဖြစ်တဲ့ သတင်းကုို တင်ပြခြင်း၊ သတင်းရေးခြင်း၊ သတင်းကုို တည်းဖြတ် ရေးသားသော အတတ်ပညာ၊ သတင်းကုို စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်တဲ့အခါ ဒီဇုိုင်းဖြင့် ပေါ်လွင် အောင်လုပ်ခြင်း၊ ဓါတ်ပုံကုို မည်သုို့ ရွေးချယ်ကာ သတင်းနှင့် ယှဉ်တင်ခြင်းပညာရပ် စတဲ့ သတင်းစာပညာ အခြေခံအချက်တွေကုို သိထားဖုို့လုိုအပ်လှပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ သတင်းစာပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကုို ဖော်ပြထားရုံမက သည်အလုပ်ကုို စလုပ်မယ့်သူအတွက်လည်း အင်မတန် ထိရောက်မယ့် လုိုရင်းတုိုရှင်း ထိထိမိမိ ပေးသွားမယ့် စာအုပ်ဖြစ်တယ်။
ကိုယ့်ဘ၀ကုို သတင်းစာဆရာဘ၀နဲ့ပဲ ပျော်မွေ့တော့မယ်လုို့ သံဓိဌာန်ချထားသူတွေအတွက် စိတ်လှူပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ သတင်းစာသမားဘ၀တွေကို လေ့လာရင်းနဲ့ အထောက်အကူ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ လူတုိုင်းနားလည်သင့်တဲ့ သတင်းစာပညာကုို အခုလုို စာအုပ်ဖတ်ရုံနဲ့လက်တွေ့ ခံစားကြရမယ်ပေါ့။
ကျွန်တော်ဟာ သတင်းစာပညာထဲ ထဲထဲဝင်ဝင် လုိုက်စားလာခဲ့တာ နှစ်၄၀ရှိပြီလုို့ ဆုိုရပါမယ်။ … ဆုိုလုိုတာက ကျွန်တော့်ရဲ့ ကျောင်းသားဘ၀ကတည်းက အထက်တန်း ကျောင်းသားသတင်းစာတွေ မှာပါဝင်လှူပ်ရှားခဲ့တာကို ထည့်တွက်ထားပါတယ် …. သည်အတွေ့အကြုံတွေကနေ လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရင်းနဲ့ သူတုို့တွေဟာ စိတ်ပါလက်ပါ သူတုို့သိထားတာတွေကုို ဝေမျှဖုို့ ၀န်မလေးကြတာ၊ သင်ပေးဖုို့ စိတ်ပါကြတာ၊ သင်ယူဖုို့လည်း စိတ်ဝင်စားကြတာတွေကုို တွေ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ သည်လုိုလူမျိူးတွေနဲ့ပဲ တွေ့ခဲ့ရတာကို ကံကောင်းတယ်လုို့ မှတ်ပါတယ်။
အာလဘားမာ (Alabama) တက္ကသုိုလ်မှာ တွေ့ခဲ့ဆုံခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေ၊ အနှစ် ၂၀ လောက် ဆရာအဖြစ်နဲ့ သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့တပည့် ကျောင်းသားတွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ သူတို့ဆီက အကြံညဏ်တွေ၊ အားပေးမူတွေ အများကြီး ရခဲ့တဲ့ အထောက်အကူတွေကြောင့်လည်း သည်စာအုပ်လေး ရေးဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ရေးဖို့ သူတုို့ပေးတဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေကအစ ထိတွေ့ဖုို့ အခွင့်အရေးတွေ ရခဲ့တယ်ပေါ့။
ကျွန်တော့်မှာ သတင်းစာအတွေ့အကြုံအဖြစ် ဘရစ်တုို၊ ဟယ်ရယ်ကုိုရီရေ၊ ကနော့စ်ဗီးသတင်းစာ၊ ချီကာဂုိုထရစ်ဗျူး သတင်းစာတွေအပါအ၀င် တော်တော်များများသော သတင်းစာတွေနဲ့ ထိတွေ့မူတွေများစွာ ရခဲ့ပါတယ်။ နေရာတော်တော်များများက သူငယ်ချင်းတွေကလည်း ပံ့ပိုးခဲ့တယ်။ ဗီအုိုအေ အပါအ၀င် သတင်းအေဂျင်စီ ၃မျိူးလောက် ဆီက သတင်းအချက်အလက်များကုိုလည်းကျွန်တော် ရယူခဲ့ပါတယ်။ မ်ိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ၊ တပည့်တပန်းတွေရဲ့ အကူအညီမပါပဲ ကျွန်တော်သည်စာအုပ် မရေးနုိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ဇနီးဆယ်လီ၊ သားဖြစ်သူ ဂျက်တုို့ကလည်း အားပေး ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျား… ။ (လုို့နိဒါန်းချီကာ သူ့စာအုပ်ကုို အမွှမ်းတင်လျက် စာဖတ်သူများလက်ထဲ အရောက်ပို့လုိုက်ပါတယ်။)
(သူ့စာအုပ်မှာ အပိုင်းတွေ တော်တော်များများ ခွဲပြီး သတင်းစာပညာကုို တော်တော်လေး နှံ့နှံ့စပ်စပ် ရေးသားထားတာပါ။ ယနေ့ခေတ်မှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့သတင်းတွေကို လုိုက်ပြီး သတင်းရေးရပုံများကုို ဓါတ်ပုံတွေနဲ့တကွ တင်ပြထားပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာသူက အဓိကအားဖြင့် – ဘယ်သူတွေက သတင်းတွေကုို ယူသလဲ၊ သတင်းကုို ဘယ်လုို လိုက်ကြသလဲ၊ အင်တာဗျူးဘယ်လုို လုပ်ဖုို့ ဘယ်လုိုပြင်ဆင်ရသလဲ၊ ဘယ်လုိုမေးခွန်းတွေကုို မေးမြန်းကြသလဲ၊ ရယူလာတဲ့သတင်းတွေကုို ဘယ်လုိုရေးသလဲ၊ ရေးထားတဲ့သတင်းတွေကုို ဘယ်လုိုပြန်လည် တည်းဖြတ်ပြီး ရေးသားရသလဲ၊ ဘယ်လုိုအတုိုချူံးပြီး လုိုရင်းကို ရေးရသလဲ၊ သတင်းတွေရဲ့ ပုံစံ ဘယ်နှစ်မျိူးရှိသလဲ၊ အယ်ဒီတာရဲ့ အလုပ်ကဘာလဲ၊ အယ်ဒီတာနဲ့သတင်းရေးသူရဲ့ ဆက်ဆံရေး ဆက်သွယ်မူက ဘာလဲ၊ အယ်ဒီတာ တစ်ယောက်ဖြစ်ဖုို့ ဘာတွေလုိုအပ်သလဲ၊ သတင်းခေါင်းစဉ်ကုို ဘယ်လုိုပေးသလဲ၊ ပုံတွေကုို ဘယ်လုိုရွေးသလဲ၊ စကားလုံးနဲ့ပုံရဲ့ ဆက်သွယ်ချက်၊ ဒီဇုိုင်းဆရာအလုပ်၊ သတင်းတစ်ပုဒ်ရဲ့အမြင်ကုို ဘယ်လုိုဖော်သလဲ၊ သတင်းရေးတဲ့စတုိုင် စသည်ဖြင့် တွေသာမက လက်တွေ့ဘ၀မှာ သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်းတွေရဲ့ အရေးပါမူတွေကုိုပါ တော်တော်လေး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တင်ပြထားပါတယ်။)
(သူ့စာအုပ်အခန်းတုိုင်းမှာ ယနေ့ခေတ်နဲ့အညီ ၀က်ဆုိုက်တွေ၊ သတင်းမီဒီယာတွေကုို ထည့်သွင်းထားတာကြောင့် ယနေ့စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ ထပ်မံ ဆက်လက်လေ့လာ လုိုက်စားဖုို့ အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ။ အမှန်ပြောရရင်တော့ စာအုပ်တစ်အုပ်လုံးဟာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ရေးသားထားတာမှန်သောလည်း တခါတခါတော့ ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်း စာရင်းဇယားတွေ၊ ဂရပ်တွေနဲ့ ရှင်းလင်းချက်တွေ တွေ့ရသေးတယ်။)
(ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။ ဘာသာပြန်မယ်ဆုိုရင်တော့ တော်တော်လေး တည်းဖြတ်ပြီး လူစိတ်ဝင်စားအောင် ပြန်ရေးရပါလိမ့်မယ်။ အခုသူ့နိဒါန်းကိုလေ့လာကြည့်ရုံနဲ့ သတင်းစာပညာရဲ့သဘောတရားများကုို စိတ်ပါဝင်စား ဖတ်ရူချင်လောက်ပါတယ်။ သတင်းလုိုက်သူတွေရဲ့ စိတ်လှူပ်ရှားစရာအခန်းတွေကလည်း ပါတယ်ဆုိုတော့ စာဖတ်သူတွေ မပျင်းတော့ဘူးပေါ့။ သတင်းလုိုက်ခြင်း၊ သတင်းရေးခြင်း အတတ်ပညာပိုင်းဆုိုင်ရာများ ကုိုပါ ရေးသားထားတာကြောင့် တချိန်ချိန်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ အခန်းတချိူ့ကုို ဘာသာပြန်ကြည့်ပါဦးမယ်။)
(REF : (Journalism by James Glen Stovall 2011, PHI Learning Private Limited မှ နိဒါန်းကုို ကုိုးကားရေးသားပါသည်။)